Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 10:54 AM
ညီမလေးရေ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်..ဘယ်လောက်ခံပြင်းဒေါသထွက်စရာကောင်းလဲဆိုတာ...ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကကောင်းပေမယ့် ကိုယ့်ကိုပြန်မကောင်းတဲ့ အပြင် ယုတ်မာသွားကြတဲ့သူတွေကို မေတာသာထားလိုက်ပါ..ကိုယ်ကောင်းတဲ့ ကုသိုလ်ကိုခံရမှာပါ..သူမကောင်းတဲ့ အကုသိုလ်သူခံရလိမ့်မယ် ညီမ...( ဒါပေမဲ့ သူ့photo ကြီးပါတင်ထားတာတော့ မကောင်းဘူးလို့ မြင်မိတယ်..သူ့အကုသိုလ်မှာ ကိုယ်ပါဝင်ရောမပါမိစေနဲ့ ညီမ)
ညီမလေး ရန်ကုန်မှာ ဆိုင်ခွဲတွေရှိလိမ့်မယ်...ပီးရင် latest design နဲ့ ညီမကြိုက်တယ့်အေ၇ာင်ပြောပီးမှာလိုက်လေ.. ဒေါ်သန်းနုတို့ဆိုင်ကနေပို့ခိုင်းလိုက် ပီး၇င် penisualar ကဆိုင်မှာဖြစ်ဖြစ် ချုပ်လိုက်ပေါ့..or ကိုယ်တိုင်းသိ၇င် ရန်ကုန်မှာ ၂ရက်ဆိုရတာပဲ..တသက်တခါ မင်္ဂလာဆောင်ရတာ..ကိုယ်လုပ်ချင်တာ သူများကြောင့် အပျက်မခံနဲ့ညီမလေး... အကူညီလိုရင် mail ပို့လိုက်နော်...Moderation လုပ်ပီး comment ပေါ်မတင်ပါနဲ့နော်..င်္ဟီးး
အစ်မလင်းလက်ရေ.... ခင်မင်မှုနှင့်လိမ်လည်ခံရခြင်း ပို့စ်လေးကို သေသေချာချာ ဖတ်သွားပါတယ်...စိတ်ထဲလည်းမကောင်းပါဘူး...
"လူအချင်းချင်းလှည့်ပတ်ခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေ"လို့ မက်မက်လည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။ :)
အစ်မရဲ့မဂ်လာ ပွဲအတွက် ကွန်ကရပ်ကျူလေးရှင်းပါ နော်.. :)
အစ်မ နော်.. မဂ်လာ လက်ဖွဲ့ အကြီးကြီးပို့လိုက်မယ်... ဟိဟိ...
တီတီလင်းလက်... .. ထာဝရ ပျော်ရွှင်ဖွယ် အိမ်ထောင်ရေးလေး ပိုင်ဆိုင်ပါစေနော်... :) :)
က မှားနေတယ်တဲ့... ပါ့ဝပ်ကလည်းမေ့နေတယ်.. နာမည်အသစ်
ကလည်းဖွင့်လို့မရဘူးတဲ့.. ဟင့်.. ဒါကြောင့် ဒီကနေပဲ.. ပြောခဲ့လိုက်တယ်နော်...
ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်အစ်မရေ... နော်... :)
Dream >> နောက်တပတ်မှ အသက်(၂၀)ပြည့်မှာပါကွယ်။ တီတီရာထူးတောင် ရသွားပြီလား :D ။ ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ C-Box အကောင့်သစ် ဖွင့်ချင်ရင် username & password ကို အီးမေးလ်နဲ့ ပို့လိုက်လေနော်။ အလုပ်မအားသေးလို့ စီဗောက်စ်ကို လုံးဝ မဖွင့်ပေးသေးတာပါ။ မဟုတ်ရင် မမြင်ဝံ့တာတွေကို မဖျက်နိုင်သေးလို့လေ။ မင်္ဂလာ လက်ဖွဲ့ဆိုရင်တော့ စိတ်ဝင်စားတယ်လေနော် :P ။ လက်ဖွဲ့သဘောထက် အမှတ်တရပေါ့ :P နောက်တာပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ :)
Anyway, you shouldn't mention her name. Don't let other person to affect your character.
You shouldn't ask the blogger's private matters in the comment. If you want to know, send her e-mail.
ညီမလင်းလက်...ဖတ်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ၊ မင်္ဂလာနေ့ရက်ကာလမှာ ဆိုတော့ Stress တစ်ခုထပ်တိုးစရာ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေ...၊
ဖြစ်ပြီးခဲ့သမျှကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ပါပဲ၊ မင်္ဂလာရှိသော နေ့ရက်ကာလများစွာကို ကိုယ့်ရဲ့ other half နဲ့အတူ တပေါင်းတစည်းထဲ ကျစ်လစ်ခိုင်မြဲစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်...။
i hope you would want to write the above topic likeastory without mentioning any specific persons. just my2cents of good will to support you. wish you have great time and congratulations for your wedding.. way to go.. :)
just be like Pollyanna, and you will be making yourself happy too.. :)
သေချာတာတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်မ ဒေါသမထွက်တော့ပေမယ့် အင်မတန်မှသိပ်ချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မ မေတ္တာတွေကို စော်ကားခံလိုက်ရတဲ့အတွက် ၊ တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲ ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ကာလမှာ ကိုယ်သိပ်ချစ်ခင်ကူညီပေးနေခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက်က ဒီလိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ကျွန်မဘ၀ထဲမှာ ဒါကို ထုတ်ပစ်လိုက်ခဲ့ပါပြီ။ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ လှပနေတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လျှောက်လှမ်းနေရင်း ကျွန်မရဲ့စာဖတ်သူတွေ မျှော်လင့်သလောက် ဒီအဖြစ်အပျက်အပေါ် မေတ္တာသိပ်များများ ကျွန်မ မထားနိုင်သေးတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဆုမွန်ကောင်းများအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် :)
အင်း..... ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာ။အဲဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးတွေကပြောတာ
We all want to see u r so happy with your man but we are waiting for your new posts, too. (Am I selfish?) :)
myint oo said...